Abasebenzisi be-ArcView 3x bayayithanda i-GvSIG-Geofumed
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/Abasebenzisi be-ArcView 3x bathanda iGvSIG
Abasebenzisi be-ArcView 3x bathanda iGvSIG
Namhlanje bendikwiziko lokuvelisa i-cartographic, omnye wabo bafunde kakuhle kakhulu kwi-Avenue, injongo yokuqala yayikukubazisa ngezinye iindlela ngaphambi kokunyamalala ngokusesikweni kwe-ArcView 3x kunye nokuthintelwa kokufudukela kwi-ArcGIS 9.
Bekuya kuba nzima ngakumbi ukuba bebengabasebenzisi beGeomedia phambi kwabo uthelekiso bekuya kuba kubanzi ngakumbi, okanye ukuba babe nemali ekhoyo kwaye bakwazi ukuthenga i-ArcGIS okanye i-Manifold-type applications enexabiso eliphantsi. Kwimizuzu embalwa yokuvezwa baye banelisekile ngeenzuzo ze-GvSIG; Ngoku ndishwankathela into endicinga ukuba ikuqinisekisile:
1. Kubonakala ngathi zombini i-ArcView kunye ne-AutoCAD
Inyani yokuba i-GvSIG ifana kakhulu ne-ArcView 3x kujongano lwayo olusekwe kwiimbono, iitafile kunye noyilo luye lwagqiba. Emva koko ubone ukuba indlela yokwakha idatha ngokufana ne-AutoCAD, kunye nemiyalelo yokuhlela eyaneleyo iye yachaphazela; Ewe siyazi ukuba abasebenzisi be-ArcView 3x babegxeka kakhulu ubunzima bokuhlela idatha ngokuchanekileyo kunye nokungabikho kwe-topology.
2. Isimahla, okanye phantse
Igama elichanekileyo likhululekile ukulisebenzisa, nangona kunjalo indlela abaye bayibona ngayo kukuba ukusabalalisa akukho mfuneko yokuthenga ilayisenisi. Eli ziko liphuhlise imisebenzi ethile kwi-Avenue, kwaye babecinga ukuba banokufudukela kwi-ArcGIS 9, into eyenzekayo kukuba kubasebenzisi bezicelo zabo kunzima ukufumana olu hlobo lwelayisenisi ... ngakumbi ngenxa yokuba ngoomasipala abafumana imivuzo ephantsi. .
Ngokuqinisekileyo, ngenxa yale nto ndithembise ukukunika ikhosi ye-GvSIG ebizwa ngokuthi "GvSIG kubasebenzisi be-ArcView" ... Ndicinga ukuba kuya kuba mnandi.
ukuthenga i-ArcGIS, i-ArcGIS Engine, i-ArcObjects, i-Gis Server, kunye ne-ArcSDE ixabisa malunga ne-57,000 yeedola. Ngoku baya kutyala kuphela i-$ 2,000 kwikhosi yeJava, i-$ 1,000 kwikhosi ye-GvSIG kunye ne-$ 2,000 ekulungiseleleni iincwadana ezilungileyo ... Ayikhululekanga, kodwa iya kubaxabisa i-$ 5,000 kuphela kuba banabadwelisi abaphatha iJava kwaye bayazi. ngamehlo abo avale ukusetyenziswa kweJava.ArcView.
3. Ukuhambelana kwenkqubo ezininzi
Ukuphuhliswa kwiJava, isebenza kwiMac kunye neLinux, oko kuthetha ukuba abasayi kuphinda bahlupheke kwipakethi yenkonzo exhasa inkqubo ababecinga ukuyiphumeza.
Okwangoku isigqibo senziwe, baya kwenza kuphela isicwangciso somsebenzi esibonisa inqanaba lokuqulunqa, uphuhliso kunye nokuphunyezwa kwenguqu entsha yenkqubo yabo. Okona kulungileyo, banethemba lokucwangcisa amava ukuwenza ube lupapasho.
Ke ewe, abasebenzisi beArcView bathanda iGvSIG. Kwiinyanga ezimbini emva koko yivavanye, sele ivelisa iziphumo.
Ndiza kukuxelela ukuba ihamba njani apho.
ArcView GvSIG OS GIS asibonise
Indawo kunye neZibonelelo eMadrid
Indlela yokudibanisa i-GvSIG ne-GIS ebonakalayo
I-gvSIG ayihlawulelwa, kodwa ihlawulwa ngeerhafu zethu ngolawulo oluthile loluntu.
Yintoni engamkelekanga kukuba isoftware etyalwe kuyo imali eninzi kunye nexesha lisemva kakhulu kwisoftware yokhuphiswano (funda i-qGIS okanye efanayo). Kwaye konke ngenxa yeSpanishi "isiko" sokwenza yonke into ukususela ekuqaleni, ngaphandle kokuphinda kusetyenziswe into esele yenziwe kuluntu (njengeGRSS, umzekelo).
Kulula, ngemali yoluntu. Zingaphi kwezi nkampani zisebenzisana kwi-gvSIG (iqeshisa i-IVER, i-prodevelop kunye nezinye), iyenza njengotyalo-mali kwaye ayihlawulisi nto?
Ngokuqinisekileyo ndijonge ukukugcina unolwazi ...
Jorge Gaspar Sanz Salinas uthi:
Ukucinga ukuba isoftware yasimahla yenye yezona mpazamo zakudala ezinokuthi zenzeke malunga neSL. Ukuba bekunjalo, ngendiphila nge-oksijini endiyiphefumlayo iminyaka emibini, kuba inxalenye enkulu yomsebenzi wam inikezelwe kwiprojekthi ye-gvSIG kwaye ngokucacileyo abaphathi bam abanalo i-philanthropic. Oko kukuthi, i-gvSIG kunye nezinye iiprojekthi ezininzi ze-SL zihlala kumaziko kunye neenkampani EZIKAMALI kwezi projekthi ezinomoya ohluke kakhulu, ezinye zingenamdla kwaye ezinye zingekho, kodwa zihlala zisemthethweni.
Kule projekthi kuhlala kukho umoya wentsebenziswano, kungekhona nje kuphuhliso kodwa nakumaxwebhu, ngoko ukuba iziko lokuvelisa i-cartographic okhankanyayo lifuna ukuthatha inxaxheba kwiprojekthi kunye nezo "manuals ezilungileyo", ndiqinisekile ukuba amaqabane am projekthi aya kwamkela. wena ngeengalo ezivulekileyo!
Ndiyakholelwa ukuba ukuba umbutho ngamnye owamkela i-gvSIG igalelo elincinci kwiprojekthi ngeencwadana, izifundo, izandiso okanye nantoni na, inzuzo iya kubuyela ngokukhawuleza kuluntu kwaye siya kufezekisa ukuba "ukuba wonke umntu uyadlala, wonke umntu uyaphumelela". Ngumahluko ocacileyo malunga nokwamkela itekhnoloji yobunini kwaye oko kwenza i-SL ibe "yindawo eshushu" yokwenyani yokusungula kunye nophuhliso.
Kwaye kuba ndinezimvo ezimnandi eziseleyo, ndiza kuzithumela kwibhlog yam 😀
Ukusuka kwiqela le-gvSIG sinokubulela kuphela ngokusazisa okulungileyo nokubi abasebenzisi abakufumanayo kwisicelo, nto leyo eya kuhlala isinceda ukuba siphucule. Enkosi kakhulu!
Ngokumalunga noshicilelo, kancinci kancinci luya kuphuculwa ngenjongo yokuba lube nolona lubalaseleyo. Kwaye i-topology sele ikwizigaba zayo zokugqibela zophuhliso, ngoko kwiinguqulelo ezizayo ziya kufumaneka kubo bonke abayifunayo.
Ngokubhekiselele kwikhosi oya kunika, ukuba uyayifuna, kwiwebhusayithi ye-gvSIG ye-"classic" (www.gvsig.gva.es) unezinto ezininzi kwicandelo lamaxwebhu; Kwiwebhusayithi ye-gvSIG yoluntu (www.gvsig.org), kwindawo "yokhutshelwa ngokungekho semthethweni", unokufumana ikhosi enikezelwe ngabahlali.